भण्टा खाने गर्नु भएको छ भने यो अवस्य हेर्नुहोस् नत्र पछुताउनु होला ! जानकारी का लागि सक्दो शेयर गरौ पुरा हेर्नुस : - Taja Khabar
भण्टा खाने गर्नु भएको छ भने यो अवस्य हेर्नुहोस् नत्र पछुताउनु होला ! जानकारी का लागि सक्दो शेयर गरौ पुरा हेर्नुस :
भन्टा हेर्दा आकर्षक देखिने गर्छ । गर्मीको समयमा पाइने तराकारीहरु मध्ये यो पनि एक हो । यो खानको लागी पनि निकै स्वादिलो हुन्छ । यसलाई हामी तरकारी को रुपमा वा कहिलेकाँही अचारको रुपमा पनि खाने गर्छौं । भन्टा जति स्वादिलो छ । यसमा पाइने पौष्टिक तत्वहरु हाम्रो स्वास्थ्यको लागी त्योभन्दा बढी लाभदायक छ । यसले हामीलाई स्वास्थ्य राख्न निकै मद्धत गर्छ ।
भन्टा खाँदा हामीलाई हुने फाइदाहरु यस्ता छन् :
१. मधुमेह नियन्त्रणमा राख्छ : भन्टा फाइबरको महत्वपूर्ण स्रोत भएकाले ब्लड सुगरलाई नियमित राख्न र ग्लुकोजलाई नियन्त्रण राख्न मद्धत गर्छ । यसले गर्दा टाइप टु डाइबिटिज लाग्नबाट बचाउँछ ।
२. मुटुरोग लाग्नबाट बचाउँछ : भन्टाको नियमित सेवनले कोलेस्टेरोलको तहलाई घटाउन सहयोग गर्छ । यसका साथै रक्तचापलाई स्थिर गर्न मद्धत गर्ने भएकाले मुटुको रोग लाग्ने सम्भावनाकम गर्छ । यसमापाइने पोटासियमका कारण शरीरलाई हाइड्रेट राख्छ ।
४. आइरनको उत्पादनमा सहयोग गर्छ : हाम्रो दैनिकजीवनलाई सहजपार्न शरीरमा आइरनको तत्व पनि आवश्यक हुन्छ । चाहिनेभन्दा बढी आइरन पनि शरीरलाई हानिकारक हुन्छ । भन्टामा पाइने नासुनिन तत्वले शरीरबाट अनावश्यक आइरन हटाउन मद्धत गर्छ । यसले हृदयाघातको खतरा पनि घटाउछ ।
९. एन्टी ब्याक्टेरियल हुन्छ : यो भिटामिन सी प्रशस्त मात्रामा पाइन्छ, जुन एन्टीभाइरल र एन्टी ब्याक्टेरियलको प्रभावकारी स्रोत मानिन्छ ।
खुट्टाले लेखेर डिग्री गर्ने रूपाको सपना हौसला सोरुप १ /१ शेयर गर्नुहोस